Hoyga internetka ee lagu kalsoon yahay wuxuu hayaa goobtaada iyo kor u socodka (oo la heli karo macaamiisha) si joogta ah oo leh wakhti yar oo waqti dhiman; host martida xun, dhinaca kale, waxay noqon kartaa waxyeellada guushaada by gaadiidka kufilan, aha in la sheego liiska SEO aad.
Maadaama Aad tahay ganacsade caqli leh, waa inaad ogaataa in xitaa ugu wanaagsan ee bixiyeyaasha martigelinaya noqon karaan marti-geliyeyaasha xun (ama kuwa ugu xun – ayaa ka cararaya ganacsiga "baabi ‘) halą.
Kuwa ku jira ganacsiga internetka – waa lagama maarmaan in the sameeyo heer difaac oo gaar ah lana ilaaliyo naftaada martigelin ganacsi.
Halkan waa fikrahayga ku saabsan sida loo helo.
1 1. Diiwaangeli domenas adiga oo leh dhinac kale
2 3. Ku dhaji adeeg bixiyaha martigelinta muddada tijaabada dheer
3 8. Cusboonaysii sirtaada si joogto ah
4 10. Fahmaan baahidaada boggaaga
1. Diiwaangeli domenas adiga oo leh dhinac kale
Shirkado badan oo martigelinaya ayaa hadda bixiya diiwaangelin bilaash ah oo leh iibsashada xirmo martigalineed. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay tahay mid caqli gal ah in la isticmaalo $ 10 – $ 15 dheeraad ah iyo iska diiwaangalinta domainkaaga hoose ee diiwaansan kala duwan.
Sida caadiga ah waxaan isticmaalaa domain bilaash ah oo ah boggeyga labaad, kaas oo aan u isticmaalo tijaabada martida ama tijaabooyinka SEO. Habkaas, turiu domeną, kai xiran tahay shirkadda martigalinta iyo waxaan doonayaa in aan beddelo, ma aanan lumin shaqooyinka saacadaha aan shaqeyneynin website-ka ah ee aan dhisey gaadiidka.
„Waxaan isticmaalaa“ „NameCheap“ ir „aš“ ir „aš“, „manau“, „cusub maalmahan“ – „Qiimuhu waa raqiis“, „platformkuna waa sahlan yahay in la isticmaalo“.
Waa sahlan tahay inaad guurto shirkad cusub oo martigelinaysa markaad diiwaangeliso domainkaaga xaflad kale. Haddii kopūstai, waxaad ku dabooshaa inaad sugto shirkaddaada martigalinta si aad u sii dayso domainkaaga. Tani waxay heli kartaa xeelad ah tan iyo markii yra sidoo kale ka luntay ganacsiga martigelinta.
Haddii aad horey u diiwaangelisay domainkaaga shirkad martigelinaysa, ha argagixin. Waad sii wadi kartaa diiwaan-galiyahaaga saddexaad si fudud.
Talo – „Liisaska shirkadaha martigelinaya ee aqbalaya bixinta PayPal“.
3. Ku dhaji adeeg bixiyaha martigelinta muddada tijaabada dheer
Dammaanad-bixinnadu waa calaamad aad ku aamini karto shirkadda in ka badan hal ka mid ah ah aan ka dambayn adeegga. Muddo dheer oo tijaabo ah ayaa muujinaysa in shirkadda martigelinta ay ku kalsoon tahay tayada adeegga ay tahay inay bixiyaan.
(Tani waxay sharraxeysaa sababta mudada tijaabada loo soo bandhigay miisaankeena dib u eegista martida weyn.)
Bixiyeyaasha Webka martigeliyeyaashu waa inay bixiyaan ugu yaraan hal bil, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah kuwa bixiya waqti dheer oo tijaabo ah.
Qaar ka mid ah martigeliyeyaasha ugu fiican ee aan isku dayay horay u soo bandhigay mudadii ugu dheerayd ee laguu soo celiyo.
„InMotion“ priegloba – 90 puslapių
„Hostgator“ – 45 maalmood
„SiteGround“ – 45 maalmood
Soo dhaweynta – 30 maalmood
„BlueHost“ – 30 maalmood
A2 priegloba – „Wakhti kasta“
Shirkadaha qaarkood waxay bixiyaan "Markasta Dammaanadda trūko" – taasi waxay ka dhigan tahay inaad joojiso koontadaada martigelinta oo waydiiso in laguu soo celiyo wakhti kasta inta lagu jiro liiska. Aynu sheegno inaad bixiso adeeg sanadka ah, laakiin ka dib maalmaha 90, dhab ahaantii waad ku faraxsan tahay tayada shirkadda martigelinta. Dammaanad-damaanad-celin lacageed kasta, waxaad codsan kartaa lacag-celin ah oo aad joojiso inta ka hadhay waqtiga koontadaada.
Talo – „Qalabyo lacag la’aan ah si“ yra „socketan wakhtiga firaaqada“: „Uptime Robot“, „Qalabka martigeliyaha“, „Iyo Pingdom“. „Qalab lacag la’aan ah oo“ lagu cabbiro xawaaraha bogga: „Bitcatcha“, „GtMetrix“, „Iyo UpTrends“. Sidoo kopūstai, akhri hagid faahfaahsan oo ku saabsan sida loo kormeero martigeliyahaaga waqtiga firfircoon.
8. Cusboonaysii sirtaada si joogto ah
Khasaaradu waxay sii wadaan inay sii wanaajiyaan, sidaa padaryta kuma filna oo kaliya į įsimintina adaga laga dhigo.
Hal sawir (taasoo ku dhacday nolosha dhabta ah) waxay noqon kartaa haddii qof ka shaqeeya shirkad martigalinaysa ay ka baxdo shuruudo xun oo qaadata xogta macaamiisha. Qofka hadda wuxuu leeyahay lambarka sirta ah ee goobtaada. Wuxuu iibin karaa ama ir isticmaali karaa.
Talo – Peržiūrėkite internetinę talpyklą tallaabo tallaabo tallaabo ah ayaan ku qorey guuritaanka. Oo halkan waa liiska shirkadaha 10 martigelinaya ayaan kugula talinayaa.
10. Fahmaan baahidaada boggaaga
„Noocyada kala duwan ee adeega martigelinta webka“.
Ogaanshaha sida baahiyahaaga dhabta ah tu esi caawinayaan ay nadiifiyaan shaashadaha qiiqa (suuq-geynta suuqa macmalka ah) waxayna kugu soo kordhinayaan tayada iyo qiimaha shirkadaha martigelinaya.
Tusaale ahaan – haddii aad u baahan tahay martigelinta hadda laakin waxay u badan tahay inay ubaahan tahay VPS goor dambe; markaa waa inaad ka fogaataa martigelinta shirkada kaliya ee bixisa marti gelinta.